Unokwenza njani ukuba i-Shower ivaliwe kwakhona? Sukungxama! Yisebenzise Ukucwina ... Ummangaliso! Khawuleza uxelele abaThengi bakho!
Ikhaya / Blog / Unokwenza njani ukuba i-Shower ivaliwe kwakhona? Sukungxama! Yisebenzise Ukucwina… Ummangaliso! Khawuleza uxelele abaThengi bakho!
Unokwenza njani ukuba i-Shower ivaliwe kwakhona? Sukungxama! Yisebenzise Ukucwina… Ummangaliso! Khawuleza uxelele abaThengi bakho!
2021 / 01 / 11 uhleloBlog 9109 0
Isikolo soShishino lokuhlambela i-2020-11-24
Ukuhlamba, sisebenzisa yonke imihla. Kodwa ngaba ufumanise ukuba intloko yeshawari esetyenziswe kangangexesha elithile igcwele amabala amthubi? Oku akubonakali kungcolile kuphela kodwa kuchaphazela namanzi aphuma kwishower. Nokuba icinyiwe ngomdaka okanye ngebrashi, emva komzamo omkhulu, isikali kusenzima ukusicoca. Okwangoku, kufuneka wenze ntoni? Musa ukungxama! Intombazana elandelayo yokuhlambela ikufundisa iindlela ezimbalwa ezilula ~
Intloko yeshawari ivalekile, iqhinga lesisombululo.
Intloko yeshawari iya kuvaleka emva kwexesha elide lokusetyenziswa. Oku kungokwemvelo. Oku akuthethi ukuba intloko yeshawari yaphukile, ungakhathazeki, akukho mfuneko yokuba uthenge entsha. Oku kubangelwa ikakhulu yikalika eyenzeka emva kwexesha elide lokukhutshwa kwamanzi. Kufuneka nje ukuba ibattery intloko yeshawa ukucoca.
1, Emva kwexesha elide lokumpompoza kwamanzi, kunzima kwezinye izinto eziyimbudumbudu kumbhobho wokungena okanye amanzi etephu ukuphuma kumngxuma weplagi, kwaye kuya kuba lula ukuvimba umngxuma wokukhupha. Susa intloko yeshawari kwaye uthambise ngobunono ukungena kwamanzi emazantsi ukuze uthule inkunkuma ngaphakathi. Qaphela ukugcina izincedisi xa ususa umlomo.
2, khetha isikhongozeli esinokubeka umlomo, uthele iviniga emhlophe, isicoci sesitya sangasese okanye isicoci seelimecale esikhethekileyo, iasidi ebuthathaka. Beka umbhobho wokuphela kokuntywila emanzini kangangexesha elithile (iyure enye ifanelekile), sebenzisa ibrashi yamazinyo encinci okanye enye ibrashi ecocekileyo, ukuze ubeke amanzi.
3, emva kokuhlamba ngamanzi, sula ucoce nge-rag ejikeleze umngxunya wamanzi kunye nomphezulu wesikali. Dibana neepositi "ezinenkani" ngakumbi, musa ukusebenzisa inaliti. Kroba ngozipho de iwe, kwaye ucoce ngelagi.
1, ukusetyenziswa kobushushu obugcweleyo akufuneki kudlule kuma-70 degrees celcius. Ubushushu obuphezulu kunye nokukhanya kwe-ultraviolet kuya kukhawulezisa kakhulu ukuguga kweshawa, kunciphise ubomi benkonzo yeshawari, ke ukufakwa kweshawa kude kangangoko kunokwenzeka kwindawo yokuhlambela nakweminye imithombo yobushushu yombane. Ukuhlamba akunakufakwa kwibha yokuhlambela ngokuthe ngqo apha ngezantsi, kwaye umgama kufuneka ube ngaphezulu kwe-60CM.
2, kwindawo yobunzima bamanzi, nceda uzame ukusebenzisa ishawa kunye namasuntswana erabha okanye isixhobo esicocekileyo esicocekileyo. Nokuba umngxuma wokuphuma kweshawari ugcwele isikali, kulula ukuwucoca. Khumbula ukuba unganyanzelisi ibhedi. Ngenxa yolwakhiwo lwangaphakathi olunzima lweshawa, ukungasebenzi ngokunyanzeliswa okungafunekiyo kuya kukhokelela kwishawa akunakubuyiselwa kwimeko yayo yentsusa.
3, vula kwaye uvale itompo yeshawa kwaye uhlengahlengise indlela yamanzi eshawa musa ukunyanzela kakhulu, ngobunono ujike i-homeopath. Nokuba itepu yemveli ayifuni ukuchitha amandla amaninzi. Nika ingqwalaselo ekhethekileyo hayi kwisiphatho setephu, isibiyeli seshawa njengesixhobo sokubambisa okanye ukuxhasa.
4, umbhobho wentsimbi yeshawa kufuneka igcinwe ikwimo yendalo, ungayi coil etephini xa ingasetyenziswa. Kwangelo xesha, nikela ingqalelo kwindibaniselwano yethumbu kunye netephu ayenzi isiphelo esifileyo, ukuze singophuli okanye sonakalise ithumbu.
5, rhoqo kwiinyanga ezintandathu okanye ngaphantsi, ishawa iya kususwa ibekwe kwisitya esincinci. Phalaza kwaye udibanise umphezulu nangaphakathi kweshawa ngeviniga emhlophe enokutyiwa kangangeeyure eziyi-4-6, emva koko wosule ngobunono umphezulu weshawa kwispout ngethambo lomqhaphu. Phinda ufake isinxibelelanisi kwaye udlulise amanzi okomzuzwana, kwaye ulinde iviniga emhlophe kunye nesikali ukuba siphume kunye namanzi, ukuze kupheliswe okanye kunciphise ifuthe lesikali kwishawari, kwaye kunokuzisa inzala.
Iingcebiso zokuhlamba iimpahla
1, iimpompo zeshawari ezifakwe eludongeni ngokubanzi zibalasele, ke lumka ungangqubeki okanye ucinezele xa ubeka izinto. Kulumkele ukunxibelelana namakhonkco kunye nezinye izinto ezilukhuni kangangoko kunokwenzeka ukunqanda ukwenzakala okubulalayo.
2, indlela efanelekileyo yokucoca kukucoca itepu ngamanzi, emva koko wosule onke amanzi kubuso bentsimbi betheyiphu ngelaphu elithambileyo, kuba amanzi aya kwenza isikali kumphezulu wentsimbi emva kolophu. Sula ngobunono, musa ukurabha ngamandla. Omile ngesiponji esimanzi kunye nofele oluthambileyo, unokwenza umbane ubengezele kwaye ukhanye.
3, njengokufuna umsebenzi omninzi wokucoca, Kungcono ukusebenzisa ulwelo olucocekileyo lweglasi, okanye olungelulo iasidi, ulwelo oluthambileyo nolunganyibilikiyo ngokupheleleyo, isisombululo esingasuswanga xa kusonjululwa ipolish ingasusa itepu kwisigqumathelo esomeleleyo kunye nesakhiwo. Sukusebenzisa nasiphi na isicoci esirhabaxa, amalaphu okanye amalaphu ephepha, kunye naziphi na izinto ezicocekileyo ezine-asidi, irubber rubbers okanye ezicocekileyo. Xa ukucoca kugqityiwe, susa yonke into yokuhlamba ngamanzi uze ucime nelaphu elithambileyo lekotoni.
Ngaphambili :: Amagumbi okuhlambela anokuhlaziywa !!! Igumbi lokuhlambela Abantu bayokwazi next: Yila igumbi lokuhlambela ekhaya ukuze ube Mhle kwaye ube neMood elungileyo kwiShower Yonke imihla
2021 Igumbi lokuhlambela elineNdonga yangasese eHung-Ungayihombisa njani iValiant and Beautiful?
I-5Mroom Igumbi lokuhlambela, ungafikelela njani kwi-Bath + Shower? Unobutyebi kakhulu